Shamarran Chibook: Yaadannoo shamarran to'annaa Bookoo Haraam jala yeroo turanitti katabame - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Murtala Muhammed Foundation
Shamarreewwaan baatii Caamsaa gadi dhiifaman keessa tokkoo wayita to'annaa garee milishoota Bookoo Haraam jala turte, waggoota sadiif attamiin yaadannoo qabachaa akka turte gaazexessituu Adaa'obii Tirishiyaa Niwaa'ubaaniitti himtee jirti.
Naa'oomii Adamuu wayita bara 2014 barattooota shamarraan irra caalaan isaanii kirisitiyaana ta'an 200 waliin garee Bookoo Haraamiin fudhatamanitti shamarree umurii waggaa 24 turte.
Isaaniin butamuun gara bosoona Saambiyaa kaaba-baha Naayijeeriyaatti argamuu geeffamuun isaanii yakka addunyaa guutuu yaaddesse ta'ee tureeera.
Tibbaa to'annaa jala turanittis, daree barnoota quraanaa akka ittiin hordofaniif barruleen kennameefii ture.
Garuu, shamarran muraasni barruulee kana yaadannoo itti qabachuuf itti fayyadaman. Wayita milishoonni harkatti argan barrulee kana akka gubaniif dirqisiifamu ture.
Durbe Adamuun garuu kan ishee dhoksuu dandeessee jirti.
Isheefi hiriyaan ishee Saaraah Saamu'eel kan umuriin waggaa 20 fi shamarran sadi kan biroos mudannoo isaanii yaadannoo itti qabachuuf barruleechatti fayyadamaa turan.
Seensi yaadannoo kan barreeffamee afaan Ingilizii salphaafi afaan Haawusaa baay'ee gaarii hin taaneeni.
Guyyaan irratti barraa'u baatu iyyuu, barreessu kan eegalan ji'oota jalqabaa itti to'annoo jala oolan irraa eegaluunii dha.
Baay'ee isaanii keessaa 10 qofti akka itti anuun wal duraa dubaan isiniif dhiyaata. Qubeefi sirni tuqaawwanii sirreefamaniiru.
1) Gochi buttaa raawwatame kan itti yaadame hinturree
Milishoonni Ebla 14, 2014 barattoota Chibook butan, kan dhaqan garuu 'kutaa motaraa' haatuuf yaadanii akka ture yaadannichaan barraa'eera.
Garuu maashinii attamii barbaacha akka ture wanti adda bahe hin jiru. Torban muraasaan dura garuu hojiin ijaarsaa gaggeefamaa tureera.
Kanaafuu, maashina ittiin simiintoon tolfamu haatuuf ta'u mala. Kunis maashinichi meeshaa waraanaa itti tolchuufis waan oluufi.
Garuu, wayita isa argachu dhabanitti barattoota gareedhaan walitti qaban maal gochu akka danda'an mari'atan.
Erga filannoowwan sukanneessoo baayyee yaadaniin booda, shamarran kanneen isaan waliin fudhatanii deemuuf murteessan.
''Jidduu isaanittis wal loluu eegalan. Mucaa inni xiqqaan tokko walitti qabuun akka nu guban itti hime. Lakkii gara Saambiyaatti of waliin fudhannee yaa deemnu, jedhee kan biraa. 'Lakkii akkas hin goonuu, yaa isaan qajeelchinutii isa booda gara mana warra isaaniitti yaa deebii'an. Osoo wal dhabaa jiranu isaan keessaa tokko ammoo, 'Ani konkolaataa duwwaa dhufee duwwaa hindeebi'u, yoo walitti qabuun [Abubaakar] hogganaa Bookoo haraam nama ta'etti, erga isaan geessiinee booda inni waan isaan godhu beekaa jedhee.''
2) Himuu seenaa baqannaa ittise
3) Gara jabinaan gowwomsuu
Milishoonni Bookoo Haaraam ijoollee dubaraa butaman irratti gowoomsoo gara jabiinaa baay'ee taphataa turuu isaanii kutaa yaadddannoo kalleessaa keessatti isiin dubbisiifnee turre.
Har'aaf ammoo yaaddannoo shamarree kannneenu kutaa afuri keessatti maal nutti himu laata? Mee walumaan yaa dubbifannu.
Shamarran kunnenis yaadannoo isaanii lafa keessa awwaluun ykn butaantaa isaanii keessa dhuksachuun turan kan tursiifatan.
4) Milishoonni komiiwwan dirqiin gudeedan jedhutti baayyee aaran
Akkuma gaaffii fi deebii duraa keessatti caqafame, dubaroonni Chibook muraasni, balaa dirqiin quunnamtii saalaa irraatiif hin saaxilamne.
Akkasumas akka itti herumaniifis hindirqisiifamne. Garuu darbee darbee jallatanii akka itti heerum amananiif ni garafamu turan. Muraasni isaan ammoo akka sanyuu beekamaniitti fudhatamaa turan.
Yaaddannoowwan kunneen akka agarsiisanitti, milishoonnis oduu midiyaaleen biraatiin shamarran gudeedaa jiru jedhuun dabarfametti baayyee aranii turan.
Ogganaan garichaa, Abubaakaar Sheka'u waa'ee kanaa yeroo baayyee dubbate ture. Jalqabas ergaa warraabbii kaasseetaatiin dubaroonni kanneen akka dhagahan taasifameere.
''Yoo galgalli gahuus walitti nu qabuun, erga nutti lallabaniin booda kaasseetta nuuf saaqan. Kaasseettichis ogganaa isaanii Mr. Abubaakaar Sheeka'un biraa ergamu isaa nutti himan....
Isaan boodas ''butuun waan asi isiin fidneef qofa jecha waa'ee daandii Waaqaa isiin barsiisaa jirra. Kana malees, maatiin keessanii fi motummaan akkasumas manni baruumsaa keessan nutti bohaa jiru.
Isaanis akka waan nuti isiin gudeedaa fi hojii badaa isiin irratti raawwataa jirrutti haasa'u… Nuti kan isiin asi finneef garuu waa'ee daandii 'Allaah' isiin barsiisuufiidha.'' jedhan.
5) Hijaaba qoramuu ittisuuf
Milishoonni, shamarran kunneen akka isaan hin qorreef, yeroo maraa hijaaba uffatanii qaama isaanii akka haguugan gaafatuun ture.
Yaadannoo iccitii shamarran Chibook
"Quraana bane dubbisuu eegale, kutaa akkas jedhus bane dubbise, wayita waraana jihaadii namootni isaan booji'an yoo jiraate,waan barbaadde gochuu dandeessa, murteen keeti…Garuu nuyi hijaaba kan nuu kennan akka qaama keenya hin agarrefi. Kunis dogoggoranii waan badaa akka hin raawwanneefi"
''Dubartoota 10 ta'an muka Tamarind jalatti qabani viidiyoo isaan waraaban. Tokko tokkon maqaa isaanii waamani, maqaa warra isaaniis gaafatani. osoo waraabani achii 'Isin midhneerraa?' jennaan, 'Lakki,' jenne.